နို့ထိန်းသည် သားအမိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » နို့ထိန်းသည် သားအမိ
Posted by naywoon ni on Jun 30, 2013 in Poetry | 14 comments
အဲ- ဒီကဗျာဖတ်ပြီး ငိုချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာတယ်။ :'(
ပြောမယ့်သာ ပြောရတယ် ကဗျာထဲက ကလေးက ကိုယ်တိုင်တွေရဲ့ ဘ၀ကို ထင်ဟပ်ပြထားသလားတောင် မသိဘူး။
မိဘတယောက်မို့ ကလေးတွေရဲ့ ဘဝကို နားလည်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်က မိဘမဲ့ ကလေးတွေကိုအလူ ပေးတုန်းက
ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ဒီထဲမှာ ငါ့ကလေး ပါပြီး
ငါက ငါမဟုတ်တဲ့တယောက်ဆိုရင်ဆိုပြီး အတွေးဝင်မိလို့
မျက်ရည်စို့မိတယ်။ (Good post ပါပဲဗျာ)
မမရေ…. ခင်ဗျားတို့ကိုစောင်းရေးနေတာဗျ …………။
မင်းမင်း ရေ….(ကိုယ့်ထက်ငယ်မယ်ထင်လို့ ကို မတပ်တော့ဘူး ) ကလေး ဆိုတာက ဘာမှမသိတတ်တဲ့ သူတွေပါ …..။ ဒီထက်နဲနဲ ပိုတွေးလိုက်ရင်ဖြင့်……………။ ကျေးဇူးပဲနော်
ရသ မြောက် တယ်ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာ..သေချာပါတယ် ။
၁။ သိင်္ဂါရ ရသ = ချစ်ခင်ခြင်း ။
၂။ဟဿ ရသ = ရယ်ရွှင်ခြင်း ။
၃။ကရုဏာ ရသ =သနားကြင်နာခြင်း ။
၄။ရုဒ္ဒ ရသ = ကြမ်းကြုတ်ခက်ထန်ခြင်း ။
၅။၀ီရ ရသ =ရဲရင့်ခြင်း ။
၆။ဘယာနက ရသ =ကြောက်ရွံ့ခြင်း ။
၇။၀ိဘစ္ဆ ရသ = စက်ဆုတ်ခြင်း ။
၈။အဗ္ဘုတ ရသ = အံ့သြခြင်း ။
၉။သန္တ ရသ = ငြိမ်းအေးခြင်း … နဲ့ (မိဘ၏အချစ်ဟူသော ၀စ္ဆလျ “၀စ္ဆလ” ရသကို ထည့်၍ ရသ(၁၀)ပါး ဟုလည်း ဆိုပါသည်။)
ဒီ ရသတွေ ထဲက…
ကဗျာ စာသားတစ်လုံးချင်းစီကို… ပြန် စစ်ကြည့်မယ် ။
ကဗျာလေးကို ဖတ်ရှု ခံစားသွားပါကြောင်းးး
ပိုလျှံ (တယ်လို့ ပြောထားတဲ့) လျှပ်စစ်တွေကို
နိုင်ငံတွင်း လုံလောက်အောင် မပေးပဲ
နိုင်ငံခြားငွေရဖို့ ထုတ်ရောင်းရတာရော ဒါမျိုးတင်စားလို့ ရသလားဟမ်??
ဒါမှ မဟုတ် စေတနာကို မရှိလို့လားဟမ် ??
မြန်မာ-တရုတ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းမှ ဓာတ်ငွေ့များကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဇူလိုင် ၁ ရက် (ယနေ့) တွင် စတင်ပို့လွှတ်မည်:(
ကျုပ်ကတော့ မို့ ပါဆွန်း ရဲ့ နို့ ရောင်းတဲ့ မိန်းမ နဲ့ ဆင်းရဲ သား တို့ ရထားပေါ်မှာ တွေ့ ဆုံပုံအကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုတို ကို သတိရမိတယ်
ယောက်ျားနေရာမှာ ဘိုနီ ပေါ့
အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ်နဲ့… ၀တ္ထုတိုကလေးတပုဒ်…
ဒီမိခင် နဲ့ဒီသား…….လို အဖြစ်မျိုး
ဒီကမ္ဘာ ဘယ်နေရာမှာ မှ မဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်……။
မတွေ့တာ ကျာဘာဘီဂေါ ဘဘနီ ..
လွမ်းလို့ လာကျိဒါ ..
ဒဒိရဂျောင်း လာပေါဒါ ..
ကဗျာလေး ဖတ်ပီး တမျိုးတမည်ဒေါ့ ဖစ်တွားမိဒယ် …
ကိုကြီးနီရေ … မတွေ့တာ ကြာပီနော် …. တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်လို့ အရင်နှုတ်ဆက်ပါရစေ ….. ကိုကြီးနီရဲ့ ကဗျာလေးက အရမ်းအနှစ်ရှိတယ်နော် …. မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ….. သမီးက မိခင်အနေနဲ့ပြောမယ်ကိုကြီးနီရာ …. အိမ်စရိတ်လိုပြီး နို့မထွက်တဲ့ မိခင်ရဲ့ ကလေးကို တိုက်လိုက်တာဟုတ်ပါပီ … ဒါဆို ကိုယ့်သားသမီးကကော သူများကြောင့် ရေပဲသောက်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားပီလေ ….. သူများကိုပေးတာ ကုသိုလ်တော့ရပါတယ် … ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရင်သွေးလေးလည်း ထိခိုက်သွားတာပဲလေ ….. သူ့ရဲ့မိခင်ဆီက ရရှိမယ့် နို့ချိုရည်တွေကို မသောက်ရပဲ နို့ငတ်ရတဲ့ ကလေးငယ်က ရင်ထဲဘယ်လောက်တောင် ဆာလောင်မွတ်သိပ်သွားမလဲ …. မိခင်ကလည်း မိမိနို့ချိုရည်ကို မိမိကလေးကို လုံလုံလောက်လောက်တိုက်ပြီးမှ ပိုလျှံတာကို သူများကလေးကို တိုက်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ် ကိုကြီးနီရေ … နို့ဆိုတာ စို့လေထွက်လေပါပဲ … မခန်းသွားပါဘူး ……….
တို့တိုင်းပြည် အဲဒိလိုဖြစ်နေတာကြာပြီပဲ ခိုင်ခိုင်ရယ်………။ စီစစ်ရေးခေတ်မှာ ကဗျာတွေ အရွေးမခံခဲ့ရပေမဲ့ ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေရေးချင် ဒီလိုရေးရတယ်လို့ ဆရာတွေက သေချာသင်ထားလို့ အကျင့်ပါနေပြီး ဒီလိုလေးရေးလိုက်တာ
တစ်ဆက်တည်း သူကြီးရေ စကားအတင်းစပ်လိုက်ဦးမယ်….။ သူကြီးပြောတဲ့ ၀တ္ထု ဆိုတာ မဖတ်ဖူးတာအမှန်ပါဗျာ….။ ကျနော်ရေးလိုက်တာက ကွယ်ကွယ်ဝှက်ဝှက်လေးရေးလိုက်တာ ခုတော့ မသူတော် သဘောနဲ့ ဘာကိုရေးတာပါလို့ ဖော်လိုက်မိပြီ….။ တစ်ကယ်တော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုဝှက်ထားပြီး ကဗျာဖတ်တဲ့သူကို စိတ်ကြိုက်ခံစားခွင့်ပေးထားရမှာ ………..။